Kolonely Lylyson : Nanelingelina an-dRavatomanga -
AccueilSongandinaKolonely Lylyson : Nanelingelina an-dRavatomanga
Kolonely Lylyson : Nanelingelina an-dRavatomanga
Niseho tampoka indray ny kolonely Lylyson de René rehefa nisitri-belona teto Madagasikara taorian’ny fotoana naharitra. Raha ny fahitana ny sariny sy ny mpanao gazetin’ny miara-manonja miara-maka sary azy ary miparitaka any anaty facebook, omaly, dia hita fa mahia dia mahia ny tenany.
Taorian’ny fiantsoana tanàna maty nataon’ity kolonely ity moa dia iny izy no tsy hita. Ny tsikaritra, dia ny gazety La Vérité izay an-dRavatomanga no nanenjika azy ary nanaovan’io gazety an-tsoratra io lahatsoratra manokana mihitsy ny tsy fahombiazan’ilay tanàna maty nataon’ny kolonely Lylyson. Vao mainka nanosika an’ity manamboninahitra lefitra ity hisitri-belona tany amin’ny nisy azy tany izany. Fantatra fa manelingelina ny biznesin-dRavatomanga tokoa ny tenany ary saika nisy fifandonana mihitsy aza tany avaratra tany. Ireo miaramilan’ny Fis mpiara-dia amin’ny kolonely Lylyson tamin’izany fotoana dia mahafantatra tsara an’izany raharaha izany.
Ka diso ny serasera raha natao entina hiampangana an’izao fitondrana izao iny sarin’ny kolonely Lylyson mahia dia mahia iny. Toa tahakan’ny mampiseho mantsy fa nohon’ny nataon’ny fitondrana no nahatonga azy hahia toa iny.
Nalefan’i Andry Rajoelina natao sorona teny Ambohitsorohitra ny zana-bahoaka ny faha-7 Febroary 2009 nakany fahefana nahafahan’izy mianakavy nangoron-karena nandritra ny dimy taona. Aza hadinoina fa noho ny tsy famelana ny orinasa DOMA PUB an’ny rafozan-dRajoelina ...Tohiny